Mkpịsị ugodi nke atọ echiche maka akpụ akpụ n'ofè mfe nwere bụ usoro. Usoro ịgwa anyị ihe mere ma ọ bụ otú a ọgwụgwọ mere mmetụta. The usoro nke na-achọ usoro a na-akpọ mgbe ụfọdụ achọ intervening variables ma ọ bụ mediating variables. Ọ bụ ezie na nnwale dị mma maka estimating causal mmetụta, ha na-emekarị bụghị e mere ka a mata usoro. Digital afọ nwere ike inyere anyị aka ịmata usoro na ụzọ abụọ: 1) ha ka anyị nwee ike na-anakọta ọzọ usoro data na 2) ha ka anyị nwee ike nwalee ọtụtụ yiri agwọ ọrịa.
N'ihi na usoro ndị tricky kọwaa chie (Hedström and Ylikoski 2010) , m na-aga na-amalite na a mfe atụ: limes na scurvy (Gerber and Green 2012) . Na narị afọ nke 18 dọkịta nwere a mara ezigbo mma echiche na mgbe ndị ọrụ ụgbọ mmiri riri limes na ha enwetaghị scurvy. Scurvy bụ a egwu ọrịa otú a dị ike ihe ọmụma. Ma, ndị a ndị dọkịta amaghị ihe mere limes gbochie scurvy. Ọ bụ mgbe 1932, ọ fọrọ nke nta ka afọ 200 mgbe e mesịrị, na ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike reliably na-egosi na vitamin C bụ ihe mere na wayo gbochie scurvy (Carpenter 1988, p 191) . Na nke a, vitamin C bụ usoro site na nke limes gbochie scurvy (ọgụgụ 4.9). N'ezie, ịmata ihe na-usoro dị ezigbo mkpa ndị ọkà mmụta sayensị-nzà nke sayensị na-banyere ịmata ihe mere eme. Ịmata usoro dị ezigbo mkpa ihe fọrọ. Ozugbo anyị ghọtara ihe mere a ọgwụgwọ na-arụ ọrụ, anyị nwere ike nwere ike ịzụlite ọhụrụ e si agwọ ọrịa na-arụ ọrụ kwa mma.
Chepụta 4.9: Limes gbochie scurvy na usoro bụ Vitamin C.
O di nwute na, na-akpa iche usoro bụ nnọọ ike. N'adịghị ka limes na scurvy, na ọtụtụ na-elekọta mmadụ ntọala, agwọ ọrịa ma eleghị anya na-arụ ọrụ site n'ọtụtụ oyiri ụzọ, nke na-eme mwepu nke usoro nnọọ ike. Otú ọ dị, n'ihe banyere mmekọrịta mmadụ na ibe norms na ume ojiji, na-eme nnyocha na-agbalị ịdị na-anọrọ usoro site obon usoro data na-anwale metụtara ịgwọ ọrịa.
Otu ụzọ nwalee pụrụ isi nwee njikọ bụ site obon usoro data banyere otú ọgwụgwọ impacted pụrụ isi nwee njikọ. Dị ka ihe atụ, cheta na Allcott (2011) gosiri na Home Energy Reports mere ka ndị mmadụ Lower ha ọkụ eletrik ojiji. Ma, olee otú ndị a na-akọ ala eletrik ojiji? Gịnị bụ usoro? Na a na-elu ọmụmụ, Allcott and Rogers (2014) partnered na a ike ụlọ ọrụ na-, site a mmelataego omume, kpatarari ozi na nke na-eji ọkụ kwalite ha ngwa ka ndị ọzọ ume ịrụ ọrụ nke ọma ụdị. Allcott and Rogers (2014) chọpụtara na ubé ọzọ ndị na-anata Home Energy Reports kwalite ha ngwa. Ma, nke a dị iche bụ nnọọ nta nke na ọ nwere ike na akaụntụ maka 2% nke ọnụ ke ume eji na-emeso ezinụlọ. Yabụ, ngwa oru upgrades abụghị ọchịchị kasị usoro site na nke onye Home Energy Report ebelata ọkụ eletrik na oriri.
Ụzọ nke abụọ na-amụ usoro bụ na-agba ọsọ nwere na ubé dị iche iche na nsụgharị nke ọgwụgwọ. Dị ka ihe atụ, na nnwale nke Schultz et al. (2007) na niile ụdi Home Energy Report nwere, keere òkè e nyere ọgwụgwọ nke nwere isi ihe abụọ akụkụ 1) Atụmatụ banyere ike ego na 2) ọmụma banyere ha ume ojiji ikwu ha na ndị ọgbọ (ọgụgụ 4.6). N'ihi ya, o kwere omume na ike ịzọpụta Atụmatụ bụ ihe mere na mgbanwe, ọ bụghị ndị ọgbọ ọmụma. Na-amata na o na Atụmatụ naanị nwere ike ịbụ zuru ezu, Ferraro, Miranda, and Price (2011) partnered na a mmiri ụlọ ọrụ nso Atlanta, GA, efehe a yiri nnwale on echekwa mmiri metụtara ihe dị ka 100,000 ezinụlọ. Ha di anọ ọnọdụ:
otu ìgwè na natara Atụmatụ na-azọpụta mmiri.
otu ìgwè na natara Atụmatụ na-azọpụta mmiri + a omume mkpesa ịzọpụta mmiri.
otu ìgwè na natara Atụmatụ na-azọpụta mmiri + a omume mkpesa ịzọpụta mmiri + ọmụma banyere ha mmiri were ikwu na ndị ọgbọ ha.
a akara otu.
The nchọpụta ahụ chọpụtara na ndị Atụmatụ naanị ọgwụgwọ enweghị utịp ke mmiri ojiji na obere (otu afọ), na-ajụ (abụọ n'afọ), na ogologo (atọ n'afọ) okwu. The Atụmatụ + mkpesa ọgwụgwọ mere sonyere ka ibelata mmiri ojiji, ma naanị n'ime mkpụmkpụ-okwu. N'ikpeazụ, na Atụmatụ + mkpesa + ọgbọ ọmụma ọgwụgwọ mere ebelata ojiji na obere, na-ajụ, na ogologo okwu (ọgụgụ 4.10). A di iche iche nke nwere na unbundled agwọ ọrịa a ezi ụzọ chepụta nke akụkụ nke ọgwụgwọ-ma ọ bụ nke akụkụ ọnụ-bụ ndị na-eme ka mmetụta (Gerber and Green 2012, Sec. 10.6) . Dị ka ihe atụ, ndị nnwale nke Ferraro na ibe-egosi anyị na mmiri ịzọpụta Atụmatụ naanị gị na-ezughị ka ibelata mmiri ojiji.
Ọgụgụ 4,10: Results si Ferraro, Miranda, and Price (2011) . Ọgwụ E zigara May 21, 2007, na mmetụta na-tụrụ n'oge summers nke 2007, 2008, na 2009. Site unbundling ọgwụgwọ ndị na-eme nnyocha na-ele anya ịzụlite a mma uche ihe ndị na-. The Atụmatụ naanị ọgwụgwọ nwere nnoo enweghị mmetụta na obere (otu afọ), na-ajụ (afọ abụọ), na ogologo (afọ atọ) okwu. The Atụmatụ + mkpesa ọgwụgwọ mere sonyere ka ibelata mmiri ojiji, ma naanị n'ime mkpụmkpụ-okwu. The ndụmọdụ + mkpesa + ọgbọ ọmụma ọgwụgwọ mere sonyere ka ibelata mmiri ojiji na obere, na-ajụ, na ogologo okwu. Vetikal Ogwe na-eme atụmatụ obi ike etiti oge. Lee Bernedo, Ferraro, and Price (2014) n'ihi na n'ezie na-amụ ihe.
N'eziokwu, obu onye ga-akpali n'ofè ịdọ nke components (Atụmatụ; Atụmatụ + ịrịọ; Atụmatụ + mkpesa + ọgbọ ọmụma) ka a zuru factorial imewe-kwa-akpọ mgbe ụfọdụ a \_ (2 ^ k \_) factorial imewe-ebe ọ bụla o kwere omume Nchikota nke atọ ọcha na-anwale (Isiokwu 4.1). Site anwale bụla o kwere omume Nchikota components, ndị nnyocha pụrụ n'ụzọ zuru ezu mata ka ọrụ na mpaghara ọ bụla na-akpa iche na na Nchikota. Dị ka ihe atụ, ndị nnwale nke Ferraro na ndị ọrụ ibe ekwughị ma ndị ọgbọ ha tụnyere naanị gaara ezu na-eduga ogologo okwu mgbanwe omume. N'oge gara aga, ndị a zuru factorial aghụghọ esiworo na-agba ọsọ n'ihi na ha na-achọ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị keere òkè na ha na-achọ na-eme nnyocha na-enwe ike kpomkwem ịchịkwa ma napụta dị ukwuu nke agwọ ọrịa. Ma, dijitalụ afọ ewepu ndia logistical constraints n'ọnọdụ ụfọdụ.
Isiokwu 4.1: Ihe Nlereanya nke agwọ ọrịa ke a zuru factorial imewe na 3 ọcha: Atụmatụ, mkpesa, ma ndị ọgbọ ọmụma. The n'ezie imewe nke Ferraro, Miranda, and Price (2011) bụ a fractional factorial imewe nke gụnyere atọ agwọ ọrịa: Atụmatụ; Atụmatụ + ịrịọ; na Atụmatụ + mkpesa + ọgbọ ọmụma (ọgụgụ 4.10).
e ji mara
4 ọgbọ ọmụma
6 Atụmatụ + ọgbọ ọmụma
7 mkpesa + ọgbọ ọmụma
8 Atụmatụ + mkpesa + ọgbọ ọmụma
Ná nchịkọta, usoro-ahụ ụzọ nke a ọgwụgwọ nwere mmetụta-na-incredibly dị mkpa. Digital afọ nwere ike inyere-eme nnyocha na-amụta banyere usoro site 1) obon usoro data na 2) kwe zuru factorial aghụghọ. The usoro-atụ aro site ndị a ọ pụrụ nwere ike mgbe ahụ site nwalere kpọmkwem site na nnwale kpọmkwem iji nwalee usoro (Ludwig, Kling, and Mullainathan 2011; Imai, Tingley, and Yamamoto 2013; Pirlott and MacKinnon 2016) .
Na ngụkọta, ihe atọ ndị a echiche-ndaba; heterogeneity ọgwụgwọ mmetụta; na usoro-enye a dị ike set nke echiche maka emebe na ikọ isi nwere. Ndị a echiche enyemaka na-eme nnyocha akpali n'ofè mfe nwere banyere ihe "ọrụ" ka baa ọgaranya nwere na nwere tighter njikọ Ozizi, na-ekpughe ebe na ihe mere agwọ ọrịa na-arụ ọrụ, na nwedịrị ike inyere-eme nnyocha chepụta ihe dị irè e si agwọ ọrịa. Nyere a Ntụpụta elo ndabere banyere nwere, m ga-now-echigharịkwuru otú ị pụrụ n'ezie ime ka gị nwere ime.